उनीसँग भेट भएको ३ वर्ष भयो । महिनावारी स्वस्छता व्यवस्थापन सम्बन्धी सन् २०१७ मा भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा हामी सहभागी थियौं । त्यहाँ भेटेर नजिक भएका थोरै मध्यमा उनी पर्छिन् । तर यो बीचमा हामीबीच कहिल्यै अन्तर संवाद भएको छैन । मसँग यति धेरै छन् कि सोध्नुपर्ने कुरा, शायद उनीसँग पनि त्यत्तिकै होला । फेसबुकको म्यासेन्जर वा मोबाइलको म्यासेजबाट हुने कुराले न प्रश्न पुरा हुन्छ न उत्तर । उनको जीवनको कयौं दुःखद अनुभवहरु जान्न मन लागेको छ । हाँसखेल गर्दागर्दै बिरामी पर्नु अनि त्यो बिरामी भएर उठ्दा त न कान सुनिन्छ, न बोली फुट्छ !
दोभाषे सरस्वती पौडेलसँग लक्ष्मी।
चञ्चले बालापनदेखि एक शब्द पनि नबोली पार गरेका ती कयौं अनुभवहरु सरर उनकै मुखबाट सुन्न पाए भन्ने मेरो अपेक्षा । कान नसुन्ने (बहिरा) भइसकेपछि उनलाई आफ्नै कक्षाका साथीदेखि सरहरुले समेत गरेको व्यवहार अनि घर र समाजले भनेको ‘लाटी’ शब्दले कस्तो लाग्दो हो । भलै उनले सुन्दिनन् तर त्यो भन्दा बढी महसुस गर्छिन्, दुःख, पीडा, संघर्षको । फेरि लाग्छ ती सबै कुरा उनकै मुखबाट सुन्न पाए ! माफ गर्नुहोला तर उकुसमुकुस लाग्छ मलाई । किनकी उनलाई भेट्नु अघि कहिल्यै पनि बहिरा व्यक्तिलाई नजिकबाट भेटेको थिइनँ, अझ भनौं महसुस गरेको थिइनँ ।
यति समयको भेटघाटले पनि किन किन अझै मलाई लाग्छ, उनी बालेको सुन्न पाए । शायद उनलाई पनि लाग्दो हो मलाई जस्तै । जन्मैदेखि नबोलेको भए त बोलीको महत्व थाहा हुँदैनथ्यो होला, उनी त ९/१० वर्षको उमेरपछि बोल्न नसक्ने भएकी हुन् । त्यसैले होला त्यतिबेलाका आफ्नो आवाज सँझिदा कति प्रिय लाग्दा हुन् । यद्यपि त्यो सँझना मात्रै हो । आफ्नो कुरा भन्न अरु कसैको सहयता लिनैपर्छ । जीवनभर ।
लक्ष्मी महर्जन (देवकोटा) । बोल्न र सुन्न सक्दिनन् अर्थात अपांगताको एउटा प्रकार ‘बहिरा’ हुन् । जन्मजात बहिरा होइनन् । काठमाडौंको डल्लुमा २०२५ सालको लक्ष्मी पूजा दिन जन्मिएकी हुन् । त्यही भएर नाम पनि लक्ष्मी राखिएको रे । सामान्य अरु बच्चा जस्तै थिइन् ८/९ वर्षसम्म । त्यसपछि एक्कासी सोध्न मन लाग्यो कसरी यस्तो भयो ?
यो प्रश्न उनलाई उनको दाभाषे (सांकेतिक भाषामा सहयोग गर्ने) सरस्वती पौडेलले सुनाइदिइन् । जवाफ दिनु अघि एकैछिन गम्भीर भइन्, शायद आफ्नो त्यो चञ्चले बालापनको याद आयो हो । त्यही कुरा उनले हातले संकेत गर्दै गइन्, दोभाषे पौडेलले मलाई भन्दै गइन् । म भने एक हातले मोबाइलमा दृष्य कैद गर्दै र अर्को हातले डायरीमा टिप्दै गएँ । मेरो प्रश्न दोभाषे पौडेललाई, उनले लक्ष्मीलाई अनि उनको हातको संकेत हेर्दै दोभाषे पौडेलले भनेपछि मैले लेख्ने । करिब ६ महिना अघिको यो प्रसंग झण्डै ४ घण्टा चलेको थियो ।
नेवार समुदायबाट छोरीलाई सहजै पढाइ हाल्ने अवस्था नभए पनि सानैदेखि विद्यालय जाने मौका पाइन् उनले । उनले वसन्तपुरको नवआदर्श माविमा उनले आफ्नो शिक्षा शुरु गरेकी हुन् । ५ वर्षदेखि विद्यालय गएकी उनी कक्षा ३ मा पुगेपछि अचानक टाइफाइड भयो । बिरामी भएर एक वर्ष विद्यालय जान सकिनन् । दुःखद भन्नुपर्छ टाइफाइड ठिक हुनु अघि नै उनको बोली र श्रवण शक्ति गुमिसकेछ । बोल्ने चञ्चले लक्ष्मी अब बोल्न र सुन्न नसक्ने लक्ष्मी भइन् ।
उनलाई परिवारले विद्यालय पठायो । उनले ३ कक्षाको पढाइ पुरा नगरेकाले त्यही कक्षा दोहो¥याइन् । सबै आफ्नो लाग्ने साथी, शिक्षक सबै बिरानो जस्तो लाग्न थाल्यो । एक्लो महसुस हुन लाग्यो । पहिले कक्षामा अगाडि बस्ने उनी अब कक्षामा पछाडि बस्ने थालिन् । सँधै अगाडि बस्ने विद्यार्थी पछाडि बस्दा शिक्षकले उनको बारेमा केही सोधीखोजी गरेनन् । बिरामी भएर एक वर्षपछि आएको विद्यार्थी भनेर पनि मतलब गरेनन् रे उनलाई । उनको परिवारले पनि विद्यालय त पठायो तर उनको नितान्त फरक अवस्थाबारे विद्यालयलाई नभनिदिएको उनी बताउँछिन् । उनलाई भने आफू असामान्य लाग्थ्यो ।
अरुभन्दा फरक अस्थाको विद्यार्थी भइसकेकी थिइन् । कोही साथीहरुसँग बोल्न पनि नसक्ने, न साथीहरुले बोलेको सुन्ने र शिक्षकले पढाएको पनि सुन्थिन् । उनको लागि विद्यालय जाने र घर फर्कने काम जस्तो मात्र भयो । नबोलेका कारण नजिकका साथीहरु पनि टाढिए, अरु पहिला बोल्नेले पनि ‘लाटी’ भइछ भन्न थालेको दुःखद अनुभव छ उनीसँग । शिक्षकले पढाएको कुरा सोध्थे तर बोल्न सक्दिनथिन्, त्यतिबेला उनलाई किन नपढी आएको भनेर पिट्थे, उत्तर दिन नसकेको भनेर कयौं पटक पिटाइ खाए पनि उनले आफ्नो अवस्थाबारे भनिनन् अथवा भन्न सकिनन् । न त शिक्षकले नै कहिल्यै बुझ्ने प्रयास गरे । उनलाई यो आफ्नै कमजोरी हो भन्ने लाग्थ्यो, त्यसैले कसरी भन्नु र ?
यद्यपि विद्यालय जान भने छोडिनन् । कक्षामा पिटाइ खाए पनि उनी किताब भने आफैं पढेर बुझ्ने कोसिस गर्थिन् । शिक्षकले बोर्डमा लेखेको हेरेर अनि आफैंले पढेको भरमा जेनतेन पास हुँदै कक्षा ७ सम्म पुगिन् । त्यो विद्यालयमा कक्षा ८ थिएन । अब अर्को विद्यालय जानुपर्ने भयो । विद्यालय खोज्दै उनलाई लिएर परिवारका सदस्यहरु धेरै ठाउँ हिंडे । तर उनी बोल्न र सुन्न नसक्ने थाहा भएपछि कुनै पनि विद्यालयले भर्ना नै गरेनन् । त्यही भएर उनले पढाइ नै छोड्नु प¥यो । त्यसपछि कहिल्यै पढ्ने अवसर पाइनन् वा भनौं मिलेन ।
पढाइ छोडेर सिलाइ
विद्यालयले भर्ना नलिएकै कारण उनी घरै बस्न बाध्य भइन् । परिवारले अहिले त अपांगता भएका आफ्ना सन्तान लुकाउन खोज्छ । आजभन्दा ५० वर्ष अघिको त कुरा के गर्नु र ? चित्त बुझाउँदै भन्छिन्, विद्यालयहरुले नै भर्ना नलिएपछि के गर्नु र त्यही भएर घरमै बसें । पुरानै किताबहरु हेर्थें । उनी सँझिन्छिन्, कुनै दिन आफ्नो बोली र श्रवण अवस्था फर्किन्छ कि भन्ने आश पनि लाग्थ्यो रे उनलाई ।
तर भावुक मुद्रामा संकेत गरिन्, ‘त्यही टाइफाइडले गर्दा बोली र श्रवण शक्ति गुमेसँगै पढाइ पनि गुम्यो । न मेरो आश पुरा भयो ।’ पढाइ छोडेर घर बस्दै गर्दा कपडा सिलाउने तालिम लिन जान थालिन् । अन्य यस्तै कामहरु गरिन् ।
अन्तरजातीय प्रेम विवाह र परिवार
हाल राष्ट्रिय बहिरा तथा सुस्त श्रवण संघकी अध्यक्ष रहेकी उनी भन्छिन्, पढाइलाई माया मार्दै गएँ । दिनहरु बित्दै गए, अहिले यही क्षेत्रका धेरैका लागि उनी उदाहरणीय बनेकी छिन् । आफू जस्तै बहिरा तथा सुस्त श्रवणहरुको अधिकारका लागि क्रियाशिल छिन् । उनको विवाह निर्मल कुमार देवकोटासँग विवाह भएको हो ।
सुस्त तथा बहिराहरुको क्षेत्रमा कार्यरत देवकोटासँग उनको भेट भयो । विस्तारै प्रेम बस्दै गयो र विवाह गरे । उनकै अनुसार देवकोटाको भने सुन्न क्षमता जन्मिंदै थिएन रे । उनी पनि विस्तारै आफू जस्तै अरुका लागि काम गर्न थालिन् सोही क्रममा भेट भएको हो निर्मलसँग । उनी जन्मजात बहिरा थिए । बहिरा संघमा गएपछि भेट भएर प्रेम हुन थालेको हो । तीन वर्षको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गरिएको हो ।
अहिले एक छोरीसहित श्रीमान् कामको सिलसिलामा अमेरिका बस्छन् तर उनी भने नेपालमै बसेर बहिरा तथा सुस्त श्रवणहरुका लागि काम गरिरहेकी छिन् । बहिरा तथा सुस्त श्रवणको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि श्रीमानले नै खोलेको संस्थामार्फत उनी काम गरिरहेकी छिन् । उनको श्रीमान् निर्मल राष्ट्रिय अपांग महासंघ र बहिरा तथा सुस्त श्रवण संघको संस्थापक अध्यक्ष भएको लक्ष्मी बताउँछिन् ।
राष्ट्रिय बहिरा तथा सुस्त श्रवण संघको मुख्य काम सञ्चार सहयोग
राष्ट्रिय बहिरा तथा सुस्त श्रवण संघ २०५२ सालमा स्थापना भएको हो । हाल उनी यस संस्थाको अध्यक्ष छिन् । संघले विशेष गरी संचारमा बहिराहरुको पहुँचको कुरालाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । भाषा र संचारमा बढी काम गर्ने यस संस्थाले सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण पनि दिने गरेको छ ।
वर्षको एक पटक नियमित प्रशिक्षण हुन्छ । तर कसैले सिक्न चाहे वा समूह मिलेर प्रशिक्षकको खर्च बेहोर्ने भए भने अरु बेला पनि प्रशिक्षण दिने गरेको उनी बताउँछिन् ।यस्तो प्रशिक्षण अन्य व्यावसायिकताका लागि वा बहिराहरुको परिवारका सदस्यले पनि सिक्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै संस्थाले रोजगारीका लागि पनि समन्वय गरिदिने गरेको छ भने दोभाषे उपलब्ध गराउने काम पनि संस्थाको प्राथमिकतामा पर्छ । त्यसका साथै बहिरा तथा सुस्त श्रवण भएकाहरुको हक अधिकारको लागि पनि पैरवी गर्दै आएको छ ।
सांकेतिक भाषाको शब्दकोष
उनी अध्यक्ष भएको राष्ट्रिय बहिरा तथा सुस्त श्रवण संघले सांकेतिक भाषाको शब्दकोष पनि निकालेको छ । तर लक्ष्मी भन्छिन्, भाषा धेरै गाहे छ । हातले संकेत गरेर मुखले ‘लिप्सिङ’ गर्नुपर्छ ।
कतिपय शब्द उस्तै उस्तै हुन्छन् । जस्तै काम, घाम, नाम, खाम आदि शब्दहरु लिप्सिङ गर्दा उस्तै हुन्छ अनि दोभाषेले बुझ्न पनि गाहे हुन्छ । त्यसको लागि धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ जिब्रो र हातको पनि । शब्दकोषमा पनि कति मात्रै शब्द राख्नु र ? बोलीचालीका धेरैभन्दा धेरै शब्द हुन्छन् ।
नेपालभरि ७ लाख बहिरा छन् भनिन्छ, तर बहिरा महिलाकै संख्या कति छ भन्ने एकिन छैन । जति अहिले भनिंदै आएको छ, त्यो भन्दा धेरै भएको लक्ष्मीको भनाइ छ । जनगणना गर्नेहरुले पनि परिवारमा को कस्तो अवस्थाका छन् भनेर सोध्दैनन् । परिवारले पनि अपांगता, बहिरा सदस्यको बारेमा सकेसम्म बाहिर भन्न चाहँदैनन् । अझ उमेरले बुढाबुढी भएकाहरु पनि कान नसुन्ने भएका हुन्छन्, उनीहरुलाई बहिरा भन्ने कि नभन्ने ?
बहिरा महिलाको समस्या
बहिरा महिलाको समस्या बहिरा पुरुषको भन्दा बढी समस्या हुन्छ । बोल्न नसकेको कारण उनीहरु माथि विभिन्न खाले हिंसा हुन्छ । यौनजन्य हिंसा पनि हुन्छ । बलात्कारकै घटना समेत हुने गरेको संचारमाध्यमहरुमा पनि आउँछ ।
त्यस्तै विशेष अवस्थाहरुमा झन् गारो हुन्छ । गर्भवती हुँदा अस्पताल जाँदा पनि दोभाषे चाहिन्छ, कुनै अस्पतालमा त्यो व्यवस्था छैन । परिवारका सदस्य लिएर गए पनि आफूलाई भएको अनि डाक्टरले सोधेका सबै कुरा बुझाउन सक्दैनन् । आफ्नै बच्चा रोएको पनि सुनिंदैन । त्यसैले बहिरा परिवारका सदस्यलाई सांकेतिक भाषा सिकाउन बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।
दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्छ
सरकारले कम्तीमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय तथा अस्पतालहरुमा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो नभए पनि दोभाषेहरुको शुल्क तिरिदिनुपर्छ । वीर अस्पतालले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई सांकेतिक भाषा सिकाउन बोलाएको थियो । त्यहाँ गएर सिकाएँ मैले नै । अरु केही संघसंस्थाहरुले पनि सिकाउन बोलाउँछन्, आफ्ना कर्मचारी पठाउँछन् । कतिपय अरुले पनि सिकेर सांकेतिक भाषालाई नै व्यावसायिक रुपमा उपयोग गरेर पनि आम्दानी गरिरहेका छन् ।
प्रविधिले सञ्चारमा सहजता
इन्टरनेट र मोबाइल फोन हिजो आज भिडियो च्याटबाट कुराकानी गर्ने माध्यम भएको छ । हुन त यो फोनबाट सबैलाई नै सजिलो छ । तर बहिराहरुको लागि भिडियो च्याटबाट कुराकानी गर्ने सजिलो भएको उनी बताउँछिन् । लेखेर एसएमएस गर्न नसक्ने नपढेकाहरु पनि हुन्छन् तर इन्टरनेट जोडेर भिडियो च्याट गर्न पनि सिकाउने गरिएकाले यसले एक अर्कामा वा टाढा हुँदा संचार गर्न सजिलो भएको छ ।
बहिराका लागि संचार भनेको भिडियो च्याट हो । मोबाइलको थ्रिजी सेवामा सहुलियत दिएको छ । तर इन्टरनेट सेवामा पनि सहुलियत हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । त्यसका साथै उनीहरुलाई त्यो भिडियो च्याट गर्न सिकाउने हो भने एक अर्काबीचको संचार हुन सक्ने उनको माग छ । सबै क्षेत्रलाई बहिरामैत्री बनाउनुपर्छ भनेर पनि बहिरा तथा सुस्त श्रवणको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले भनिरहेका छन् ।
यसका लागि ठूला कार्यालयहरुमा दोभाषेको व्यवस्था हुनुपर्छ अथवा मन्त्रालयहरुदेखि अस्पताल, कार्यालयहरु, बैंक जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा मन्त्रालयमा टेलिसेन्टरहरु स्थापना गर्नुपर्छ । जस्तै कोही बहिरा व्यक्ति वीर अस्पताल पुग्यो भने त्यहाँको टेलिसेन्टरमा त्यो बहिरा व्यक्ति र डाक्टर बस्ने र दोभाषे जुन ठाउँमा भए पनि उसले उसको संकेत अनुसार कुरा भनिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्मीलगायतको माग छ ।
यसो गर्दा बढी खर्चिलो पनि नहुने र सहज पनि हुनेछ । दोभाषे स्वयं सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नु परेन । जहाँ भए पनि अनलाइनमा भए पुग्यो । त्यसका साथै नयाँ नयाँ प्रविधिहरु आइरहन्छ, ती कुरा बहिराहरुलाई बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै इन्टरनेट सेवामा पनि सहुलियत दिनुपर्छ । त्यो बहिरा र दोभाषे दुवैका लागि नै आवश्यक छ ।